Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: ဒီလို ဒွန့် ဒွန့် ဒွန့် လုပ်ရုံနဲ့ ကျေမယ်လား
ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ (မင်္ဂလာတိုက်) ၏ မနေ့ညက မရမ်းကုန်းမြို့မယ် ဇမ္မူသီရိကျောင်းတိုက်မှာ ကျင်းပတဲ့ ဓမ္မသဘင် တရားပွဲ ဒုတိယည (၂၀၁၀ ဇန်-၁၉) မှာ ကမ္မဝိဘင်ဂသုတ်ကို ဟောသွားပါတယ်။ ကံ ကံ၏ အကျိုးပေါ့ဗျာ။ အဲ့တရားပွဲမှာ ကြုံကြိုက်တုန်း ဆရာတော်က ဆုံးမသွားတာလေး ရှိပါတယ်။
စာနဲ့တိုင်တာကော၊ ခွေပို့ပြီးလာတာကော အများကြီးပဲ မအားလို့ ဖွင့်မကြည့်ရသေးဘူး။
အကုသိုလ်ကံနဲ့ ကုသိုလ်ကံ ချေလို့ မရဘူးဆိုတာ ဘုရားဟော အစစ်။
ဒီလို ဒွန့် ဒွန့် ဒွန့် လုပ်ရုံနဲ့ ကျေမယ်လား စဉ်းစားသာ ကြည့်တော့။
လူတိုင်းမှာ ချိန်ခွင်တစ်လက် ဆောင်ထားဘို့ လိုတယ်။ သင့်၏ မသင့်၏ ဟုတ်၏ မဟုတ်၏ အကျိုးအကြောင်း အဆိုးကောင်းကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ ချိန်ခွင် (သမ္မာဒိဌိ)။
သံဃာ၏ အလုပ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တိုးပွားများပြားလာရေး အဓိက မဟုတ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သစ္စာကို သိမြင်၍ နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရေးအတွက် လမ်းညွှန်ပြဘို့သည်သာ အဓိကဖြစ်။
သက်ဆိုင်တဲ့ အပိုင်းရဲ့ စာလုံးစေ့ပတ်စေ့ကို ခွေရတာနဲ့ စာကူးရိုက်ပြီး တင်ပါမယ်။ အသံလည်း တင်ပေးပါ့မယ်။ (နာလိုသူရှိရင်ပေါ့)။ ဆရာတော့်စကား ပြန်သုံးရရင် လူတိုင်းမှာ ချိန်ခွင်တစ်လက် ဆောင်ထားဘို့ပဲ လိုပါတယ်။ (သာဓု...သာဓု....သာဓုပါဘုရား)
Posted by Ko Gyii at 4:50 PM
Chan Nge Thursday, May 12, 2011
I just visit to ur site.
It is good and many things to read.
May u success.